बस्दा कस्तो कुर्सी प्रयाग गर्ने ? कुर्सीमा बस्ने तरिका नमिले के हुन्छ ?
काठमाण्डौ। कुर्सीमा बस्दा होस् या पलेटि कसेर सबैजनाको बस्ने आ-आफ्नै तरिका हुन्छ । कुर्सीमा बस्ने सामान्य तरिका थाहा नहुँदा हामीले आफ्नो शरीरलाई बिगारिरहेका हुन्छौँ । जसले गर्दा जन्मिँदै निर्माण भएको शरीरको बनावट बिगार्ने काम भइरहेको हुन्छ । यसरी अज्ञानताको कारण गलत तरिकाले बस्दा ढाड तथा शरीरमा नै समस्या निम्तिरहेको हुन्छ । ढाड दुख्नु एक प्रकारको जटिल समस्या मात्रै नभएर अन्य रोगको कारणका रूपमा पनि देखापर्न सक्छ । यसरी ढाड दुख्नुलाई मेकानिकल ब्याक पेन भनिन्छ ।
ढाड दुख्ने कारण बसेर काम गर्दा हाम्रो शरीरमा कम्मरको भागको मांसपेशीमा बढी लोडपर्छ । अझ, अगाडि झुकेर काम गर्ने मानिसले गलत कुर्सी प्रयोग गर्दा यस्तो लोड झन् बढ्न जान्छ । यसले शरीरको जुन भागमा बढी लोड नपर्नुपर्ने हो सोही भागमा दबाब पर्छ । लोड नपर्ने स्थानमा दबाब बढ्दा मेकानिकल स्ट्रेस पर्न जान्छ । यसले गर्दा मानिसलाई ढाड दुख्ने समस्या सुरु हुन्छ । यसरी ढाड दुख्ने समस्याले बिस्तारै शरीरको हड्डी खिइँदै जाने क्रम सुरु हुन्छ ।
कुर्सीमा कसरी बस्नेभन्दा पनि धेरै समय बस्ने कुर्सीको बनावटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कुर्सीमा मानिस बस्दा केही भाग भित्र पसेकोजस्तो देखिन्छ । बस्दा यस्तो कर्पलाई ध्यान दिएर बस्नुपर्छ । हामी बस्दा सीधा ब्याक सपोर्ट भएको कुर्सीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
आँखाको सीधा हुने गरी मनिटर राख्नुपर्छ । आई लेभल मनिटरसँग नमिलेमा आँखामा पनि समस्या हुन सक्छ । किबोर्ड र मनिटर साइडमा राखेर काम गर्दा जति वेला पनि शरीर बंग्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बानीका कारण धेरै मानिसमा ढाड दुख्ने समस्या पाइएको छ । किबोर्ड छातीको एंगल सीधा हुने गरी राख्नुपर्छ । मनिटर र किबोर्ड मिलाएर राखेमा ढाड दुख्ने मात्र नभएर अन्य समस्या पनि आउन दिँदैन ।
यति सामान्य कुरामा पनि हामीले ध्यान नदिने हो भने शरीरको हड्डी खिइने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । हड्डी खिइएपछि सो स्थानमा टुसा पलाउँदै जान्छ । यदि यसरी हड्डीमा टुसा पलाउँदै गएको खण्डमा पलाएको टुसाले नसालाई घोच्न सक्छ । जसका कारण खुट्टा पोल्ने, दुख्ने झमझमाउनेलगायत समस्या देखापर्न सक्छन् ।
धेरैजसो मान्छे खुट्टा क्रस गरेर बस्छन् । तर यो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक कुरा हो ।
यसरी बस्दाका हानिहरू :
१। यस्तो पोजिसनमा बस्दा तपाईंलाई रक्तचाप सम्बन्धी समस्या आउँछ । शरीरमा रगतको प्रवाह खुट्टा हुँदै मुटुतर्फ गएको हुन्छ । अनि खुट्टा क्रस गरेर बस्दा रगतलाई मुटुमा पुग्न सकस पर्छ ।
२। यसरी बस्दा तपाईंलाई पक्षाघात पनि हुनसक्छ । तपाईंले खुट्टा क्रस गरेर बसिदिँदा पेरिनियल नर्भमा दबाब पर्छ र मांसपेशीहरू सुन्न हुन पुग्छन् ।
३। लामो समय खुट्टा क्रस गरेर बस्नुभयो भने ढाडको समस्या आइलाग्छ ।
४। खुट्टा क्रस गरेर बस्दा नसाहरू फुल्ने सम्भावना हुन्छ । यसरी बस्दा नसालाई नोक्सानी पुग्छ र कमजोर हुन जान्छ ।